'जुत्ता सिलाएरै श्रीमतीलाई नर्स पढाउँछु' :: सन्जिब बगाले :: Setopati
'जुत्ता सिलाएरै श्रीमतीलाई नर्स पढाउँछु'
सन्जिब बगाले काठमाडौं, वैशाख १२
ललितपुरको सातदोबाटो-हात्तीवन सडक किनार उनी पाँच महिनादेखि पुराना जुत्ता-चप्पल र झोला सिलाइरहेका छन्।
उध्रिएको सिलाएर आफ्नो जीवन उनिरहेका यी व्यक्ति हुन् सर्लाही, मलंगहवाका भरत राम।
भरतको विशेषता के भने, यही सडकमा उनी ३५ वर्षदेखिको पुस्तैनी व्यापार धानिरहेका छन्। अर्थात्, भरतका बाबु ठागा राम सातदोबाटो क्षेत्रमा जुत्ता सिलाएर बसेको ३५ वर्ष भयो।
भरतलाई यहाँ सडक किनार पसल चलाउन थाल्दा सुरूमा अप्ठ्यारो भएको थियो। विभिन्न बहानामा उनलाई हटाउन खोजियो। तर, बाबुको ३५ वर्षे बिरासतले आफूलाई हटाउने प्रयास विफल भएको उनी सुनाउँछन्।
'मलाई हटाउन खोज्नेहरू ठागा रामको छोरा भन्ने थाहा पाएपछि आफैं पछि हटे,' उनले भने, 'अहिले त कुनै समस्या छैन।'
भरतले १२ कक्षा पास गरेका छन्। श्रीमती दिपाली ठाकुरको पढ्ने इच्छा पूरा गर्न उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिएनन्। बरू श्रीमतीको पढाइ निम्ति बाबुजस्तै जुत्ता सिलाएर पैसा जम्मा गर्न थाले।
दिपालीको स्टाफ नर्स पढ्ने धोको छ। उनको यही धोको अब भरतको सपना बनेको छ।
'म त अब पढ्न सक्दिनँ, किनकि मैले पढेँ भने कमाउने कसले? कमाइ नभए दिपालीलाई स्टाफ नर्स कसरी पढाउने?' भरतले भने, 'हाम्रो बिहेलाई अहिलेसम्म उसको माइतीले स्वीकारेको छैन। त्यही भएर म उसलाई जसरी पनि पढाउँछु।'
भरत राम र उनकी श्रीमती दिपाली
भरत र दिपालीले प्रेम-विवाह गरेका हुन्। दिपालीका बाबु गाउँका मुखिया हुन्। आफूलाई तल्लो जातको भनेर ससुरालीले स्वीकार नगरेको भरत बताउँछन्।
एक वर्षअघि दिपालीसँग बिहे गरेपछि उनको माइती पक्षले प्रहरी लगाएर भरतलाई सातदोबाटो थानामा थुनाएको थियो।
'हामीलाई दुई दिन प्रहरी कार्यालयमा थुनियो। जातपातको कुरा हो भन्ने थाहा पाएपछि बल्ल प्रहरीले छाडिदियो,' भरतले भने, 'मेरी श्रीमती मभन्दा तीन महिना जेठी छ, तर उसको बाबुले उमेर घटाइदिएकाले बिहे गर्ने बेला उमेर पुगेन भनेर उजुरी गरिएको थियो।'
सातदोबाटो प्रहरीसँग राम्रो चिनजानले आफ्नो कुरा बुझाउन सजिलो भएको उनी बताउँछन्।
महिनाको छ हजार रूपैयाँमा दुई कोठा भाडामा लिएर बसिरहेका भरत दिनको ८ सयदेखि २ हजार रुपैयाँ कमाउँछन्। उनको बाबु पनि महिनाको झन्डै १५ हजार बचत गर्छन्। छोराको इच्छाअनुसार बुहारीलाई पढाउन ठागा राम तयार छन्।
'छोराको इच्छा छ भने मैले सहयोग गर्नैपर्छ। उसले कसैलाई ठगेको छैन। आफ्नो दुःख गरेर खाएको छ,' ठागा रामले भने, 'आफ्नो कमाइले पुगेन भने त्यसले खर्च माग्ने मसँगै त हो।'
सातदोबाटो सडकमा भरतसँगै उनका दाजु राम पनि बस्छन्। राम कपडा सिलाउने काम गर्छन्। उनी अहिले यही काम निम्ति दुबई जाने तयारीमा छन्। यसअिघ साउदी गएका थिए।
सधैंभरि सडकमै जुत्ता सिलाएर बस्ने कि सटर राख्ने भन्ने जिज्ञासामा भरतले भने, 'अब दाइ विदेश जान्छ, अनि पैसा भयो भने सटर लिनुपर्ला।'
भरतलाई भने उनका बाबुले प्रहरीमा भर्ती हुन भनेका छन्। उनलाई प्रहरीमा जागिर खान मन छैन।
'प्रहरीमा जागिर गरेर के गर्ने, कमाइ पनि थोरै हुन्छ,' भरतले भने, 'मलाई त आफ्नै काम गर्न मन छ।'
दिपालीलाई स्टाफ नर्स बनाउने धोको पनि त पूरा गर्नुछ।
भरत राम जुत्ता पालिस गर्दै। तस्बिरः सेतोपाटी
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, वैशाख १३, २०७६, १५:००:००
वामदेव र खतिवडा दुबैलाई तत्काल राष्ट्रिय सभामा नपठाउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री
कोरोना भाइरसले सेयर बजारमा ५० खर्ब डलरको क्षति
सारंगीलाई 'कूल' बनाउँदै किरण नेपाली
सचिन र अफ्रिदीको रेकर्डलाई पछि पार्ने कुशल
गोकुल बाँस्कोटाको अदालत जाने बठ्याइँ
झगडा मिलाउन खोज्दा उल्टै हत्या!
कोरोनाभाइरसका कारण शुक्रबारसम्म विश्वभर दुई हजार ८७३ को मृत्यु
प्रहरीले लाठी हिर्काउँदै खेदेका महिलामध्ये एकसँग पूर्वजर्नेलको २२ वर्षदेखि सम्बन्ध
वुहानबाट ल्याइएका नेपाली सत्रौँ दिनपछि मात्रै घर फर्कने
रिहा भए किताब करको विरोध गर्दा पक्राउ परेका विद्यार्थी
एमसिसी र वाइड बडीमा निर्माण गरिएका नकारात्मक बिम्ब ! शंकरप्रसाद अधिकारी
नुवाकोटकी जीवित कुमारी रिना खनाल
‘छोरी भए पुगिहाल्यो’ दिनभरि गाउँदै हिँड्ने, ‘अबोर्सन क्लिनिक कता छ?’ दिन बितेपछि धाउँदै हिँड्ने! रेशा भट्टराई
छाउपडीबारे बुझ्न डोटीको गोदरा गाउँ पुग्दा... शिवकुमार राई
प्रेम पूजारी प्रर्मिला राई
स्मृतिमा रोशनी महेन्द्र पौडेल